NAQSHADEYNTA MUUQAALKA DACHA: QAABEYNTA, SAWIRRADA, SIDA LOO SAMEEYO MASHRUUC AAD GACMAHAAGA U LEEDAHAY - NAQSHAD WEYN
Nashqada muuqaalka labadaba waa farshaxan iyo farsamad diirad saaran. Muuqaalka dhismaha si wanaagsan loo qorsheeyey wuxuu si fudud u shaqeynayaa, wuxuu abuuraa meel bannaan oo bannaan, wuxuu hagaajiyaa hareeraha, wuxuuna kaloo yareeyn karaa qiimaha kuleylka iyo qaboojinta guriga. Nidaamka qorshaynta ee qaabka dacha, mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee hagaajinta guriga, badanaa waa la iska indhatiraa. Natiijo ahaan, waxaan ku aragnaa geedka qulqulka badan iyo dhirta, geedaha iyo geedaha, oo ku yaal meel aad u dhow dhismayaasha, dhir badan oo isku nooc ah. Sida loo abuuro muuqaal sax ah oo ku haboon goobta, iyada oo la fahmay qaababka, qorsheynta, waxqabadka beerta iyo walxaha qurxinta, waxaanu tixgelin doonaa qodobka.
Marka la eego taariikhdeeda qarniyadii hore, farshaxanka muuqaalka muuqaalka ayaa leh qaabab badan, markaa waxaan eegnaa kuwa ugu caansan.
Naqshadeynta muuqaalka caadiga ah ayaa sidoo kale leh magac labaad: beeraha rasmiga ah. Habkani wuxuu ku qeexan yahay joomatariga saafiga ah, isku-dhafka iyo khadadka fiiqan. Waxay leedahay taariikh dheer. Marka aynu ka fekereyno naqshad beerta caadiga ah, maskaxdeena waxay soo jiitaa hanti aad u weyn, laakiin mabaadii'da naqshaddaha classic waxay faa'iido u tahay abuurista beer yar yar.
Maanta lagama maarmaan maaha inaad tahay qof hodon ah, si aad ugu raaxaysatid beertaada qaab muuqaal ah, waa ku filan in la ilaaliyo mabaadi'da aasaasiga ah, sida:
Joomatari sahlan. Sida naqshadaha dhismaha, qaabaynta beerta rasmiga ah waxay leedahay xididada joomatari ee dhismaha Giriigga iyo Roomaaniga. Jaangooyo, ama mid caadi ah, jardiinooyinka ayaa u muuqda inay xoojiyaan khadadka tooska ah, xaglaha saxda ah iyo wareegyada.
Saameyn dheellitiran. Qiyaasta ayaa ah sida baaxada qayb kasta oo beertu ay la wadaagto guud ahaan, waxay udub dhexaad u tahay dhismaha casriga ah iyo naqshada muuqaalka.
Naqshadee weelka. Qeyb weyn oo ka mid ah naqshadda muuqaalka qoyaanka, isbarbar dhiga labada dhinac ayaa loo isticmaalaa, kaas oo ah qaabab isku mid ah oo u dhigma midba midka kale marka uu taagan yahay ama dhinac xagal ah. Tani waxay abuureysaa dareen ah amar waxayna siinaysaa naqshad dareen isku dheelitiran. Fekeradu waxay inta badan ku dhameeyaan barta odhaahda (qayb ka mid ah farshaxan ama warshad leh tayada sarraysa), qaabka uu ka soo horjeedo khadadka toosan ee naqshadeynta.
Wadashaqeyn Ku celcelinta qaababka beerta oo idil waxay gacan ka geysan kartaa helitaanka midnimada naqshadeynta.
"Qalfoof" wanaagsan. Dhagaxyada, dayrarka, dhalada, jidadka waa qaybaha beerta ee aad arki karto sanadka oo dhan. Waxay sameeyaan qaabka, ama "qalfoof" beerta, xiisaha xitaa jiilaalka.
Laakiin markaad dooranayso qaabkan, waa muhiim inaad xusuusatid in naqshadeynta caadiga ah ee degaanka magaaladu ay u baahan tahay daryeel badan.
Habka muuqaalka ayaa u sahlan in lagu garaaco aagagga aag ballaadhan oo leh qulubyo geedo iyo geedo. Laakiin waxaa suurtogal ah in la isku dayo in lagu dabaqo waxyaabaha ka mid ah qaabkan iyo meel yar. Taas waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho xayawaanka alpine, roodhiga, biyaha iyo waxyaabaha kale ee laga helo dabeecadda. Waddooyinka waa in laga sameeyaa taarikada, inta u dhexeysa cawska iyo geedaha ayaa gari doona wakhti ka dib, iyo geed waa in lagu beeray geesaha si ay u siiyaan muuqaalka keynta kaynta. Waxa ugu muhiimsan ee aad ku dadaalayso markaad dooranayso qaabkan waa dabiiciga, isku dheelitirnaanta, dabiiciga.
Waa wax aad u jilicsan oo dabiiciga ah marka loo eego qaababka kale ee muuqaalka. Xitaa haddii aadan ku noolayn baadiyaha, adigoo dejinaya sawirkaaga qaabkan wuxuu kugu dhigi doonaa inaad dareentid inaad ku jirto meel sidaas oo kale ah. Goobta bogga oo aan lahayn wax sawir ah iyo dhammaan waxyaabaha aan caadiga ahayn waa inaad ahaato hadaad doorato naqshadeynta.
Guriga dalka ee qaabka rusticka ah, waxaa muhiim ah in la diyaarsado waddooyinka si aan habooneyn, sida haddii aan si ula kac aheyn. Qalabaynta alaabooyinka noocan oo kale ah waxay noqon karaan dhoobo, dhar alwaax ah, faaruqin gogol ah taasoo cawska iyo dhagaxa dabiiciga ah si cad u galaya. Cawska ama cawska hore waa in ay si fiican u eegaan. Xitaa cawska iyaga ku yaal wuxuu noqon karaa meel sare oo aad u kala duwan.
Way fiicantahay haddii ay jiraan geedo badan oo bixiya hadh wanaagsan, sida oak, pines, maples. Laga soo bilaabo dhirta midabada leh iyo xoortayada waa inay ku daraan chamomiles, lilacs, marigolds, pansies, calendula, hydrangeas iyo løndag.
Iyo kan ugu muhiimsan: ha la dagaalamin dabeecadda. Qaabka noocan ah ee naqshada muuqaalka ah waxaa loo ogol yahay dayacaad. Haddii ay suurtogal tahay, ha soo baxaan ubaxa - taasi waxay ku darsataa xitaa jiiraan badan oo leh muraayada hore ee miyiga ah.
Jardiinooyinka dhaqameed ee Japan ayaa loogu talagalay inay si nabad ah u fikiraan. Waxay inta badan la xiriiraan falsafadda, Sinoistaha, iyo falsafadda fayadhowrka waxayna raadiyaan inay siiyaan ruuxa ruuxiga ah ee soo booqda. Elements of a Japanese Japanese ku baraarujin ama calaamadee xubno dabiiciga ah. Badanaa dabiiciga ah iyo iswaafajinta beerta waa, ka sii wanaagsan ee fekerka noqon doona.
Nidaamka beerta ee Japan, afar waxyaalood ayaa loo adeegsadaa: dhagaxyada, biyaha, dhirta iyo qurxinta. Marka aad dooranayso oo aad walxahaas ku dhejisid booskaaga, waxaa muhiim ah inaad maskaxda ku hayso mabaadii'da asaasiga ah ee naqshadaynta beerta Japan, oo ay ku jiraan asymmetry, qoryaanta, muuqaalka amaahda, dheelitirka iyo calaamadda.
Beerta Japan waxay caddayn u tahay fududaanta iyo ujeedada. Natiijada ugu dambeysa ee guuleysiga, fursada ugu fudud ayaa ugu habboon.
Habkani qaabeynta qaabka cimilada maanta - Tani waa isku dhaf ah Moorish iyo isbedelka Muslimiinta. Astaanta dhexe ee qaabkan waa isha biyaha, sida balli ama ilo.
Meelaha loo qoondeeyay shaqooyinka manhajka waa inay ahaadaan qaab ah laba jibbaar. Muuqaal aad u muhiima ee qaabkan waa joogitaanka maqaarka, sariiro ubax udgoon.
Xor ayaad u isticmaali kartaa inaad isticmaasho dhirta caynkaas ah - Beerka, lakab, korriin, oregano, carnations, miiqyada. Dhirta miraha waa inay sidoo kale joogaan.
Markaan soo bandhigno muuqaal muuqaal ah, waxaan si deg deg ah uga fikirnaa wadamada kulaylaha. Sidaa daraadeed, qaabkani waxa uu caan ku yahay joogitaanka goobta ku yaala dhirta sii kordhaysa ee dhirta midabyo kala duwan, sanamyo kala duwan iyo cajalado kala duwan oo ku saabsan mawduuca Africa. Kaliya walxo dabiici ah ayaa la isticmaalaa. Ha iloobin inaad fiiriso dhirta - waxay u baahan yihiin in lagu beeray hab sidaas oo ay isugu wada macaamilaan oo lagu diyaariyo heerarka. Gaaritaanka beertaas, waxaad dareemi doontaa sida hawdka.
Haddii aad jeceshahay midnimada dabiiciga ah, fududeyn iyo qallafsanaanta, xakamaynta iyo shaqeynta, markaa hubaal waa inaad fiiro gaar ah u leedahay qaabka Scandinavian ee naqshada muuqaalka. Waa wax ku-oolsan meelaha yaryar ee magaalooyinka yaryar, sababtoo ah diiradda ugu weyn ee halkan ka taagan waa isafgarad, is-dabiici iyo dhir badan. Haddii aad rabto, waxaad jebin kartaa beer yar yar, waxa ugu muhiimsan waa inaad sariirta diyaarsatid, si adagna u qaabeysan. Ha iloowin wax sawirada beerta: Iyada oo la raacayo qaabkan, gawaarida kala duwan, gnomes iyo goblinsku waxay degi karaan goobtaada.
Habka bilaashka ah ee naqshada muuqaalka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'romantic'. Ma jiraan heshiisyo iyo qaabab. Waxa ugu muhiimsan ee aad ku dadaalayso waa isafgarad, dareen ah jacayl iyo nabad. Waa hagaag, haddii goobta ay noqon doonto geedo jir ah, biyo, ogol yahay dhirta duurka iyo joogitaanka qaboobaha waa la soo dhaweynayaa. Ka taxadar mawduuca midabada midabka ee alaabta beerta - midabada iftiinka leh iyo midabka dhalaalaya ma aha mid khuseysa halkan.
Qaabka muuqaalka Ingiriisiga - Tani waa saameyn la ogsoon yahay oo lagu bedelay mudnaanta naqshadaynta muuqaalka ee jardiinooyinka rasmiga ah, calaamadaha simmeterka ah si aad u sarreeya oo aan caadi ahayn. Beerta Ingiriisku waxay ahayd midkii ugu fiicnayd qarnigii siddeedaad, waxaanay bedeshay qaybo badan oo ka mid ah muuqaalkii bulshada. Habkani waxa uu dhiirigeliyay rinjiyeynta, nashqadahana waxaa saameeyay farsamooyin badan, sida taariikhda, falsafada iyo sayniska.
Naqshad cusub oo qaabka Ingiriisiga ah ayaa waligeed isbedelay beerta waxayna saamayn ku yeelatay guryo badan. Xaqiiqdii, beeraha ugu horreeya ee Ingiriisku waxaa la sameeyay 1700kii horaantii. Hadafku wuxuu ahaa dhul dabiiciga ah, inkasta oo lagu soo bandhigay oo jaceyl la isku hayo si loo qariyo qaybo adduunyo iyo jilicsan.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah beeraha ugu weyn adduunka waa Jardiinada Ingriiska ee Munich. Meelaha guud waa 4.17 km², dhererkeedu waa qiyaastii 5.5 km.
Dad badan, ereyga "beerta ingiriisiga" waxa loo siman yahay naqshad beerta dabiiciga ah. Meesha ay bilaaban karto waxaa lagu magacaabi karaa cawska waaweyn iyo geedo waaweyn. Cagaar cagaaran - Muuqaal muhiim ah ee qaabkan.
Astaamaha guud ee beerta Ingiriisiga:
Harada. Mar walba waxaa jirey harada jardiinooyinka Ingiriisiga - intooda badani waxay ahaayeen kuwo dabiici ah, laakiin dhammaantood waxay ku daydeen mashaariicda biyaha dhabta ah.
Geedaha - waxay ku kala firirsan yihiin dhulka oo dhan iyagoo leh jidad u oggolaaday inay beerta beerta u waraabiyaan geedkii.
Gawaarida - waxay isticmaashaa dabeecado dabiiciga ah oo aan ku xadgudbin dabeecadda dabiiciga ah.
Grottoes - waxaa loo isticmaalaa hoyga romantic. Waxay ahaayeen kuwo dabiici ah, laakiin loo dhisay si ay u ekaato godka dabiiciga ah.
Jardiinooyinka-Ingiriisiga ayaa lagu dhisay heer aad u ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, weli way suurtogal tahay in la abuuro beerta qaabkan qaabbilaadda xagaaga xagaaga. Tusaale ahaan, haddii aadan haysan aag aad u sameysid haro dabiici ah, waxaad si sahlan ugu bedeli kartaa balli aan dabiici ahayn. Gobollada dhirta waxaa lagu bedeli karaa koox yar oo geedo ah. Jardiinooyinkan waxaa loogu talagalay in ay eegaan dabiiciga ah oo ay noqdaan meel loogu talagalay fikirka iyo nasashada.
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu yaqaan qaabka muuqaalka muuqaalka Ingiriisku waa ka baxa sariiraha jiiratiga jilicsan ee qaababka serpentine.
Qeybinta qoondaynta iyo qaabeynta
Markaad go'aan ka gaartid qaabka beertaada, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa qaabkeeda, qulqulka iyo iftiinka si loo doorto meeleynta ugu guulaha badan dhammaan noocyada dhismaha iyo dhirta yaryar.
Waxaa jira dhowr nooc oo laybarasho ah: qaylo-toosan, wareeg ah, garaacid, bilaash ah. Nooca ugu fudud ee lagu guuleysto ee bannaanka u bilowga ah waa nooc ka mid ah qorshaynta qaab-dhismeedka. Dhamaan noocyada ayaa ku haboon isaga waana sahlan tahay in la garaaco. Waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho nooca wareegga ah oo ku yaal aagag la isku qurxiyo, oo bixiya mawduucyo ku saabsan cawska, barkadaha iyo ubaxyada.
Haddii aad rabto in aad aragto balaarinta booska, ka dibna nooca xaglaha ayaa kugu habboon. Qorshaha bilaashka ah, inkasta oo si fudud u muuqata, waa midka ugu adag, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad yeelato dareen ah.
Waxaad xiiseyneysaa inaad wax ka barato farshaxanka iyo farshaxanka beerta, sida: beerta ubaxa ee taayirada ama dhagaxyada, xayndaabka ceelka, gabiyada, dhagaxyada dabka, ladybugs, xayawaanka beerta, warshadaynta qoraxda qorraxda, naxbiyaasha.
Si aad u siiso goobta aad u qurux badan oo qurxoon, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u siiso aagagga awoodda leh. Markaa, waxaad ku dhejin kartaa sheyga lagama maarmaanka u ah goobtaada. Aagagga waxaa laga saari karaa iyadoo la isticmaalayo waddooyin, dabbaaldegyo, kala duwanaansho dheer, godad iyo xitaa midab.
Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee naqshada muuqaalka waa nalalka. Isticmaalida nidaamka nalalka si habboon loo habeeyay ma aha oo keliya in lagu gaaro jawiga la doonayo ee dacha, laakiin, waxa ka sii muhiimsan, dareemaysaa raaxo. Sidaa awgeed, waxaa jira laba nooc oo iftiin muuqaal ah: waxqabadka iyo qurxinta. Marka ugu horeysa waa lagama maarmaan inoo sahlanaato, tan labaad - si loo abuuro jawi.
Markaad dooranaysid iftiinta ha illoobin tayada alaabta sababtoo ah nalalka ayaa ku jiri doona jawi aad u dagaalamaya: waxay u saameyn doonaan qorraxda, qoyaanka iyo barafka.
Waxaa jira tiro aad u badan oo ah beerta jardiinooyinka xagaaga, waxaan hoos ku eegaynaa kuwa ugu caansan uguna xiisaha badan.
Maanta buurta Alpine waa nooca ugu caansan ee sariirta waxayna awood u leedahay in lagu qurxiyo beerta nooc kasta, qaab iyo cabbirka. Waxay ku dhejisaa xayndaabka alpine, waxaadna ku dhejin kartaa dhul kasta, inkastoo, dabcan, shaygu wuxuu u egyahay mid si fiican u muuqda.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrisid sida loo qaabeeyo gawaarida alpine oo aad u sameysato adigoo ku caawinaya midabadan oo kale sida: yare, roon, dhalinyaro, juniper, jajab, phyllose awl, aquilegia, Japanese spirea, asal alpine, jilbaha geeska.
Ha ilaawin in xayawaanka alpine lagu qiimeeyo quruxda dhagaxyada, ma aha geedo. Dooro dhagaxyo leh qaab dhismeed xiiso leh, laakiin la mid ah midba midka kale.
Ha iloobin baaxadda goobta aad ku nooshahay: aag yar waa inaadan dhigin dhagxaan waaweyn, dhagaxyada yaryar ma eegi doonaan meel ballaadhan. Dhirta waa in loo doortaa mid aan qabyo ahayn, diiqad badan oo la raaco.
Waa muhiim! Markaad sameysid alpine slide waa inaadan soo qaadin dhir dherer ah: dhererku waa in aanu ka badneyn hal mitir iyo badh.
Cawska cawska iyo sariirta ubaxa
Cawska iyo sariirta ubax ee dacha - mid ka mid ah qurxinta ugu fiican. Wax kasta oo ah qaabka qaabka muuqaalka muuqaalka ah ee aad doorato, kiis kasta, waa inaad u fiirsataa waxyaalahan soo socda ee beerta. Isbeddelka ubaxyada waxay abuurayaan tiro badan, ugu muhiimsan - waa inay ku habboonaadaan fikradda guud. Waxaad isticmaali kartaa qalabyada gacanta, tusaale ahaan, sida daasadaha qadiimka ah, dheriyada, dambiilaha iyo xitaa qubeyska iyo baaskiiladaha, iyo inaad sariiraha ubaxa quruxda badan iyo quruxda ah u hesho.
Sidoo kale ha iloobin naqshadeynta cawska, sababtoo ah ma aha oo kaliya cawska oo aad u baahan tahay inaad ka gooyo wakhti ka waqti: iyada oo caawinaadeeda waxaad dooran kartaa meelaha qaarkood oo xoojiya joomatirka goobta.
Dhirta iyo geedo waa qayb muhiim ah oo ka mid ah beerta. Ku darista muuqaalkaaga, hadday tahay hal ama dhowr, waxay si weyn u horumarin doonaan muuqaalka iyo qiimaha boggaaga. Geedaha waxay abuuri karaan hawaag dabiici ah oo kursiga keydka ah. Xayawaanku waxay xannibi karaan dabaysha waxayna ka ilaalin karaan aragtida shisheeyaha.
Mid ka mid ah khaladaadka ugu weyn ee naqshadeynta muuqaalka waa doorasho khalad ah iyo meeleyn. Ugu yaraan, waa inaad tixgelisaa xajmiga dhirta baaluqa iyo habdhaqanka nidaamka asaasiga ah, sababtoo ah dhir aad u sarreeya wuxuu dhaawici karaa khadadka korontada, nidaamka xididana wuxuu waxyeeleyn karaa koronto hoosaadka. Marka lagu daro, markaad dooranayso geed ama geedo, waa in loo dhigaa si aanay u tartamin nalalka iyo nafaqooyinka ka soo baxa ciidda.
Waa muhiim! Geedaha waa in la beeraa oo aan ka yarayn 5 mitir ka ah derbiyada dhismayaasha oo aan ka yarayn 1.5 mitir laga soo bilaabo korantada dhulka hoostiisa. Shubo, siday u kala horreeyaan, - aan ka yarayn 1.5 mitir oo aan ka yarayn 1 mitir.
Waa hagaag, iska ilaabi qaabka la doortay iyo fikrada guud ee beerta sidoo kale maaha mid u qalantaa. Maanta waxaa jira xulasho aad u qurux badan oo geedo qurxoon iyo geedo. Isku day inaad doorato kuwa ugu haboon ee ku habboon qaabka naqshadaynta muuqaalka goobtaada.
Haddii aad rabto inaad kor u qaaddo dacha yar, ka ilaali boodh ama ku beerta beerta, ka dibna fiiro gaar ah u yeelashada beerta toosan. Ma aha oo kaliya daaqado kala duwan, lianas oo ku wareegsan dhismayaasha ama godadka, laakiin sidoo kale jardiinooyinka dhinacyada. Dambe waxaa la abuuri karaa iyadoo la adeegsanayo weelal kala duwan oo naqshado kala duwan ah. Waxaa intaa dheer, haddii fikrada guud ee naqshadeynta muuqaalka ah uu oggol yahay, waxaad abuuri kartaa sariiraha tooska ah.
Ka hor inta aadan jebin beerta ubaxa, ka samee qorshe ah beeritaanka ubax, iyo sidoo kale taxadar gaar ah foomka - Waa inay la socotaa qaabka guud ee naqshada muuqaalka.
Marka la abuuro sariirta ubaxa waa inaadan ku dadaaleynin isku-dhafka adag, waxaa fiican in dhirta lagu beero buste. Tixgeli isku-dhafka ee ma aha oo kaliya noocyada midabada, laakiin sidoo kale kala duwanaanshahooda midabkooda si ay u gaaraan natiijada ugu haboon.
Ma taqaanaa? Keukenhof - beerta ubaxa ugu weyn adduunka, oo ku taalla Netherlands. Qiyaastii 7 milyan oo nalalka ubaxa ah ayaa sannad walba lagu beeray beerta, taas oo ku taal aagga 32 hektar.
Kalluunka iyo deyrarka
Duufaantu waxay qurxin doontaa goob kasta oo waxay ku siisaa muuqaal muuqaal leh, weliba, Waxay kaa badbaadin doontaa dabaysha, barafka, boodhka iyo kuleylka. Ka hor intaan la beeri, xulo dhirta ku habboon, falanqee ballaca iyo dhererka aad rabto inaad hesho xayndaab, xaddid intee le'eg oo loo qoondeeyo daryeelka.
Waxa ugu wanaagsan in la doorto geedo cadceed ah oo kugu farxi doona sanadka oo dhan, laakiin, nasiib daro, doorashada ee dhirta sida ma aha mid aad u weyn: heather, lingonberry, juniper, spruce iyo geed. Markaad dooranaysid dhirta noocan oo kale ah, waxaad u baahan tahay inaad dulqaaddid, sababtoo ah marka hore xayndaabka noocan oo kale ah waxay u egtahay mid xun oo dhowr sano ka dib ay awood u yeelan karto inay fuliso shaqadeeda. Haddii aad ubaahan tahay inaad xaliso dhibaatooyinka dhirta, si dhakhso ahna waa inaad u fiirsataa dhirta isku midka ah. Для любителей активного цветения подойдут вьющиеся растения, выбор которых достаточно широк.
Haddii aad rabto inaad diirada saarto naqshadda aan caadiga ahayn ee degaankaaga banaankeeda waxaadna muujisaa qaar ka mid ah meelaha ay ka soo jeedaan jawiga taariikhda, ka dibna ma sameyn kartid waxyaabo qurxoon oo lagu qurxiyo beerta.
Noocyada ugu badan ee naqshada muuqaalka ayaa la soo dhaweeyay joogitaanka kaydka. Way fiicantahay haddii ay jirto dabiiciga dabiiciga ah ee goobta, ka dibna, inta badan, naqshadeynta oo dhan waxay ku saleysan tahay in lagu xoojiyo dhammaan quruxda. Laakiin haddii aysan jirin, markaas waxaad abuuri kartaa hanti dabiici ah, laakiin waa inaad si taxadar leh u baartaa faahfaahinta farsamada.
Haddii aad tahay mulkiilaha aag yar, waxaad si fiican u taxadartaa ilaha ama durdurrada cascading.
Sidoo kale akhri sidii aad u dhisi lahayd ilo iyo biyo-qabad oo ku yaala gacmo iyaga u gaar ah.
Dhismaha Dacha way adag tahay in la qiyaaso iyada oo aan lahayn dhammaan noocyada dhismayaasha - Kuwani waa sawirro, qoryo, platform, godad, xannaano iyo xitaa garoomada ciyaaraha: dhammaan walxahan waa inaysan ka soo baxin sawirka.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay beerta qaabka Japan, waa in la dhiso meel isku mid ah. Muuji fikrada, waxyaabo caadi ah, sida aqalka dhirta lagu koriyo ama daaqada, waxaad samayn kartaa muujin ka mid ah beertaada.
U akhri si la mid ah gacmahaaga si aad u sameysatid veranda, aqalka dhirta lagu koriyo, aqallada dhirta lagu koriyo, barxad, boodboodka beerka, pergola, madoow
Marka beerta xaafadaha banaanka ah inta badan la dayacay. Waxaan qorsheyneynaa kaydka, qoryaha, beeraha ubaxa, laakiin badana waxaan illownaa inaan ka fekerno sida loo xariiro dhammaan aagaggaas. Adoo iska indha-tiraya wadooyinka beerta, beerta waxay noqon kartaa kala-jajab, sababtoo ah la'aanta waaya-aragnimadooda, la'aanta isgaadhsiinta.
Ma aha oo keliya wadooyinka ayeey ku hogaaminayaan dadka ku xeeran deyrkaaga, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inay abuuraan jawi ama jawi. Markaad qorsheyneyso wadooyinka, waa inaad ka fekertaa waxa ay noqonayaan qalabka ay noqonayaan, inta badan ee loo baahan yahay, inta jeer ee loo isticmaali doono, haddii ay daboolayaan.
Sidoo kale akhri sidii aad u samayn lahayd waddo ka timaada geedaha jaraya.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah qalab si loo abuuro tracks, halkan waxaa ka mid ah: beton, dhagax, dhagax, lebbiska, mulch. Ha iloowin in aad si wanaagsan u eegto jidka tareenada ee dabacsan. Maaddooyinka jilicsan waa inay ahaadaan kuwo u fiican fikradda beertaada.
Dhismayaasha iyo foomamka dhismaha ee yaryar
Goobjoogta kuxigta ah ayaa lagu beddeli karaa beerta - Muuqaalku wuxuu noqonayaa mid maskax badan oo fekeraya, shakhsi ahaan.
Tan iyo silhouette beerta isbeddelay xilliyada iyo marxaladda waqtiga, sawirku wuxuu heystaa meel dhexe. Shay si fiican loo dhigaa wuxuu kor u qaadi doonaa quruxda beertaada wuxuuna ka tarjumayaa qaabkaaga shakhsi ahaaneed. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigi karaa walxo la yaab leh - si aad tan u sameyso, u dhig meelo "jeebad" raacaya waddada gaaban.
Waa muhiim! Dhismayaasha dibedda waa in ay awoodaan in ay u adkeystaan ​​wax kasta oo cimilada ah iyo heerkulka ba'an - qalabka sida birta, naxaas ama dhagax ku habboon shuruudahan.
Soo-ururinta, waa in la sheegaa in ay jiraan tiro aad u tiro yar oo qaabab dhismeed oo yaryar oo aan ku qurxin karno, ku dhajino sawirro ama ka dhigo boggayaga si waxtar leh. Xeerka ugu weyn ee aad xasuusato waa: wax walba waa in ay wada jir u wadaagaan.
Waxa la tixgelinayo marka la qorsheynayo naqshad dhuleed ee goobta
Marka aad bilowdo mashruuc muuqaal ah, waxa ugu horeeya ee la tixgeliyo waa - tani waa sida aad u rabto inaad u isticmaasho meel.
Ujeedooyinka guud ee isticmaalka banaanka ah:
karinta iyo karinta;
Markaa waxaad u baahan tahay inaad ka fekertid cidda isticmaali doonta booska - haddii ay jiri doonto carruur yaryar oo ku taal goobtaada, ama waxay ahaan doontaa meel loogu talagalay dadka waaweyn. Ha iloobin xayawaanka raba: waxay inta badan dejiyaan qawaaniinta marka ay qorsheynayaan muuqaalka dhulka banaankeeda.
Ma taqaanaa? Waxaa jira ilo ku yaal Alupka Park "Trilbi", oo loogu tala galay qoyska eyga ee Mikhail Vorontsov. Waxay u egtahay ey ey ku dhegan tahay bisad.
Sidoo kale, markaad qorsheyneyso waa inaad ogaataa jihada dabaysha iyo jihada aduunka. Ka dibna fiiri carrada. Waa muhiim inaad hubiso in ay leedahay nafaqooyinka saxda ah si ay u taageeraan walxaha dhirta aad dooratay.
Qodob muhiim ah oo la tixgelinayo marka aad dooranaysid dhirta waa degaankaaga cimilada. Waxaa lagu go'aamiyaa xaaladaha sida heerkulka iyo roobka.
Isla markii aad fikrad ka leedahay dhirta aad isticmaali doonto, bilaabaan inay ka fekeraan meelaynta ayadoo ku xiran helitaanka biyaha. Haddii ay jiraan meelo gaar ah oo la ururiyo, markaa dhirta u baahan in badan oo ah qoyaan waa in lagu ururiyaa halkaa. Dhinaca kale, haddii ay jiraan meelo gaar ah oo biyuhu si degdeg ah u dhaqaan, waxaa haboon in la beero dhirta oo jecel xaaladaha qalalan. Nidaamkan waxaa badanaa lagu magacaabaa beerto sida waafaqsan hydrozones.
Waa hagaag, waxa ugu dambeeya ee laga fekerayo - Racfaankaan iyo qaabka qaabeynta muuqaalkaaga. Tixgeli qaabka gudaha iyo dibedda ee aqalka ku yaala dhismaha, iskuday in aad abuurto midnimo iyaga u dhaxeysa iyo muuqaalkaaga.
Naqshad dhuleed ee wanaagsan ee xagaaga xagaaga wuxuu abuuraa jawi deggan oo leh mulkiilaha, waqtiga badbaadinta, dadaalka, lacagta iyo ka faa'iidaysiga deegaanka. Ku dadaal inaad sameysid xagaaaga xagaaga si ay u muujiso shakhsiyaddaada oo kaa caawiso inaad dareentid farxad iyo raaxo.
Video: Naqshadeynta muuqaalka mashruucaaga
Shabakadaha isticmaalayaasha rukunka:
Bishii Agoosto 2007, iibsasho cajiib ah ayaa lagu sameeyey qaab dhismeed xagaaga oo leh guri ka baxsan xadka magaalada. Nasiib darro, maanta ma jiraan sawirro goobta kuxiran ee lagu soo iibsaday. Dhibaatada ugu horeysay ee aan wajahey ka dib iibsashada sawirka ayaa ahaa la'aanta meel aan baabuur dhigan. Fikradda, qiyaastii dhammaan deriska waxaa haysta gawaarida, laakiin cidina xitaa lama socoto qalabka meelaha baabuurta la dhigto ee santuuqa. Xaaladayda, tan ayaa sii xumaysay xaqiiqda ah in qaybtu ahayd dhammaatay, iyo si ay u sii wado, waxay ahayd lagama maarmaan in ay "baabi'iso" khilaafka 2-3aad ee baabuurta deriska ah (iyadoo ku xiran maalinta toddobaadka). Intaa waxaa dheer, waxaa jiray irid ku yaal meesigeyga si uu ugu soo galo barxadda, laakiin waxaa jiray hal nasiib xun: albaabka wuxuu ahaa qiyaastii 70 sentimitir oo ka sarreysa heerka deyrta, siday u kala horreeyaan, waxaa suurta gal ah in la galo barxad kaliya oo ay la socoto gawaarida xamuulka ah. Intaa waxaa dheer, gargaarka goobta ee meeshan waa mid aad u adag, iyo wax kasta oo ku saabsan yahay 1.5-2 mitir ka sareeya deriska. Inkastoo uu madaxu jabiyay, waxaan go'aansaday inaysan aheyn lagama maarmaan in la maalgaliyo lacag iyo waqti badan (Waxaan doonayay inaan sameeyo jeegga sida ugu dhakhsaha badan) si aan u qorsheyno dhul adag haddii ay jirto waddo "dhinaca" dhinaca dhinaca kale ee ugu yaraan aan laheyn wax dhibaato ah baabuurta deriska ah. Hawlgalku wuxuu ahaa sidan: si loo jebiyo qayb ka mid ah xayndaabka, si uu u rakibo albaabbada halkii (albaabka xaydaanka ayaa la igu sameeyay ka hor), waana wax dabiiciga ah in loo dhexgalo baabuurka. Hawlgalkani waxaa sii xumeeyey xaqiiqda ah in deyrka la qorsheeyay in lagu badalayo irid albaab weyn oo ah nooc kasta oo qashin ah, iyo khudaarta gaboobey oo koray goobta goobta baabuurta la dhigto ee mustaqbalka. Qashinka ayaa ii qalanayey "qashin" waxaanay qaadatay qashin-qubka, iyo khudaartu waxay ahayd mid si qarsoodi ah loo gooyey waxaana la siiyaa wakhti goor la bixinayo qoryo lagu kariyo kebabska :). Wixii soo saarista albaabka waxaa lagu martiqaaday khubaro, sababtoo ah Marnaba ma lahan wax waayo-aragnimo leh mashiinka alxanka wata, mana haysto wax duugo leh. Ka dib marka la eego dhammaan cabbirka iyo isuduwidda sawirada wax soo saarka mustaqbalka, takhasusayaasha "waxay igu soo rogeen" albaabka wicket ee hadda jira. Markii wax walba la sameeyay oo la rakibay, waxaan ku faraxsanaa in albaabku "igu soo rogay" aniga, sidaas darteed guud ahaan muuqaalku wuu ka fiicnaaday. Anigu waxaan dhiganayay baabuur dhigta, marka hore marka la xakameynayo cidhiidhka la taaban karo, ka dibna la geliyo boodbooyinka (wakhtigaas, qiimaha boodhadhka ayaa la barbardhigi karo sibidhka), iyada oo tixgelinaysa in ay noqon doonto mid aad u qurux badan marka loo eego fudud sahlan. Sababtoo ah albaabku wuxuu ku yaal meel fog oo ka soo galaya iridda, goobta baabuurtu waxay go'aansatay in "laga gooyo" wax yar oo ka soo jeeda jidkii hore, iyo inta u dhaxaysa waddada iyo waddada uu ku abaabulay sariirta ubax, kaas oo uu ku amray inuu hagaajiyo gabadhiisa.
Gurigu waa inuusan ahayn mid qurux badan, laakiin sidoo kale waa mid xiiso leh. Anigu waxaan dhihi karaa mid la mid ah naqshada muuqaalka dacha. Waa inay noqotaa mid wanaagsan, qurux badan, xiiso leh iyo asal ah. Haddii aanad weli go'aansan, la xiriir shirkadda cawska, naqshadeeyuhu wuxuu imanayaa goobtaada, ku baraarujin doona, fiiri goobta, iwm, ka dibna soo jeedi xalal dhowr ah dhibaatada. Miyaad jeceshahay balliinka goobta? Shakhsi ahaan, waxaan runtii, waxay ku daraysaa nooc ka mid ah jilicsan iyo xasilooni.
Aniga, sidoo kale, sannadkaas ayaa ujoogay dacha, waxay soo dhigtay waddooyinka leh xargaha kabaha. Waxaanan soo iibsan maadada caadiga ah ee cawska iyo caajiska, laakiin dhagaxyada farshaxan ee dhagxan macmal ah. Dabcan, waxay u egtahay mid aad u qurux badan, halkan qof ayaa la siiyaa in lagu shubo qashinka wadooyinka, bedelida maskaxdaada, ka iibso xayawaan farshaxan leh //artirock.ru/bruschatka/, dhammaan dhagaxan macmalka ah maaha mid qaali ah, laakiin waxay u muuqataa mid qaali ah iyo xitaa sida wax xun . Kaliya ku haboon guriga aqalka, waxaad siisaa goobtaada qaab dhexdhexaad ah, iyo haddii aad rabto, waxaad sidoo kale ku soo rogi kartaa dhagax lagu qurxiyo guriga horteeda, kaas oo aan samayn doono sanadkan.